सरकारले मेरो मृत्यु रोज्यो, वार्ता गर्न खोजेनः डा केसी – YesKathmandu.com
सरकारले मेरो मृत्यु रोज्यो, वार्ता गर्न खोजेनः डा केसी
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले सरकार आफुसँग बार्ताका लागि गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । -सरकारले वार्तामा कन्जुुस्याईँ गरिरहेको छ, उल्टै जवरजस्ती राजधानी ल्याउँछु भन्ने जवाफ दिन्छ, राजधानी लिएर मलाई अलमल्याउने प्रयास गरेको छ-डा केसीले भने ।
केसीले औपचारिक वार्ताका लागि पहल गरेको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश पोखे । सरकारले वार्ताको तयारी भन्ने तर अहिलेसम्म वार्ताटोली समेत गठन नगरेको लगाए । -सरकारले मेरो मृत्यु रोज्यो, वार्ता गर्न खोजेन- डा केसीले आक्रोसित हुँदै सहकर्मी चिकित्सकहरुसँग भने-मलाई मरे मरोस् भनेर सरकारले सोचेको रहेछ आखिर त्यस्तै हो भने म पनि आज उपरान्त कुनै स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउँदिन । तीन करोड नेपालीको हितका लागि लड्दै गर्दा मृत्युवरण गर्नु परे पनि म तयार छु ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पहिले डा. केसीको उपचार त्यसपछि वार्ता गर्ने बताएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले जवरजस्ती भएपनि डा. केसीलाई राजधानीमा ल्याउने बताए । तर केसीले भने राजधानीमा लगेर आफुलाई सरकारले सडाउन खोजेको बताएका छन् ।
सत्याग्रहको १४ दिनसम्म पुग्दा डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रँदै गएको छ । विगतका अनसनको तुलनामा जुम्लाको चिसो मौसम र हाई अल्टिच्यूडका कारण नयाँ–नयाँ समस्याहरु देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।